Maitiro Ekuchengeta Vashandisi Vako Vachifara Kana Vachiburitsa Huru Kugadziridza kune Yako Kunyorera | Martech Zone
Kune kukakavara kwechisimba mukugadzirwa kwechigadzirwa pakati pekuvandudza uye kugadzikana. Kune rimwe divi, vashandisi vanotarisira maficha matsva, mashandiro uye pamwe kutaridzika kutsva; kune rimwe divi, shanduko dzinogona kudzoka kana zvimiro zvinozivikanwa zvangoerekana zvanyangarika. Kunetsana uku kwakanyanya kana chigadzirwa chashandurwa nenzira inoshamisa - zvakanyanya zvekuti zvinogona kunzi chigadzirwa chitsva.
At CaseFleet isu takadzidza zvimwe zvezvidzidzo izvi nenzira yakaoma, kunyangwe tiri padanho rekutanga mukukura kwedu. Pakutanga, yedu yekushandisa kufambisa kwaive mumutsara wemifananidzo kumusoro kwepamusoro peji.
Kunyangwe kukosha kwekushongedza kwesarudzo iyi, takanzwa kumanikidzwa nehuwandu hwenzvimbo iripo, kunyanya apo vashandisi vedu vaiona iyo app pazvidiki zvidiki kana nhare mbozha. Rimwe zuva, mumwe wevagadziri vedu akasvika kuzoshanda neMuvhuro mangwanani nezvibereko zveprojekti yevhiki nevhiki isina kuziviswa: humbowo hwepfungwa yekuchinja kuchimiro. Iyo yepakati yeshanduko inofambisa kufamba kubva pamutsara uchitevedza kumusoro kwechidzitiro kuenda kukoramu iri kuruboshwe:
Chikwata chedu chakafunga kuti dhizaini yacho yaitaridzika kunge yakanakisa uye, mushure mekuwedzera mashoma ekupedzisa, takaiburitsa kune vashandisi vedu svondo iro tichitarisira kuti vafare. Takanga takanganisa.
Kunyange vashoma vevashandisi vakabva vangogamuchira shanduko iyi, huwandu hwakawanda havana kufara zvachose uye vakataura kuti vane dambudziko rekutenderera chikumbiro. Kunyunyuta kwavo kukuru, zvisinei, kwaive kusiri kuti ivo vaisada marongero matsva asi kuti zvakavabata.
Zvidzidzo Zvakadzidziswa: Chinjo Yaitwa Zvakarurama
Nguva inotevera patakachinja chikumbiro chedu, takashandisa maitiro akasiyana zvakanyanya. Yedu yakakosha nzwisiso yaive yekuti vashandisi vanofarira kuve mukutonga kwavo ramangwana. Kana vabhadhara kunyorera kwako, vanozviita nechikonzero, uye havadi kuti zvinhu zvavo zvakakosha vabviswe kwavari.
Mushure mekupedza yedu nyowani-yakagadzirirwa interface, hatina kungoiburitsa. Pane kudaro, isu takanyora blog post nezvazvo uye takagovana screenshots nevashandisi vedu.
Tevere, isu takawedzera bhatani kune inogamuchirwa skrini mune yedu app ine hombe musoro, imwe yakanyatsogadzirwa-kopi uye hombe orenji bhatani inogamuchira vashandisi kuyedza iyo nyowani vhezheni. Isu takaonawo kuti vanogona kudzokera kuchinyorwa chekutanga kana vachishuva (kwekanguva zvakadaro).
Pane imwe nguva vashandisi vanga vari mushanduro itsva, nhanho dzinodikanwa kudzoka kumashure dzaive dzakawonekwa zvakati wandei kure muzvirongwa zveprofayera yemushandisi. Isu hatina kuda kuviga bhatani kuti tidzokere, asi isu zvakare hatina kufunga kuti zvaizobatsira kuti vanhu vachinjane vachidzokera nekudzoka, izvo zvinogona kunge zvaiyedza kana bhatani raioneka nekukasira. Muchokwadi, mushandisi mumwe chete akambodzoserwa mukati memwedzi-wakareba opt-in nguva. Zvakare, panguva yatakabhenekera switch uye takaita iyo nyowani vhezheni inomiririra vangangoita vese vashandisi vedu vanoshanda vanga vatendeuka uye vatipa mhinduro huru pashanduro nyowani.
Kuwedzera kune izvo zviri mu-app zvinokurudzira zvatakapa kuti tishandure, takatumira maemail akati wandei tichiita kuti vashandisi vazive chaizvo kana shanduko yeshanduro nyowani yaizoitwa zvachose. Hapana akabatwa zvisina kurongeka uye hapana akachema-chema. Muchokwadi, vashandisi vazhinji vakafadzwa zvakanyanya nechitarisiko chitsva.
Zvakadaro, zvakakosha kuti uzive kuti kuburitsa gadziriso nenzira iyi hakuna mahara. Boka rako rekuvandudza richafanirwa kuchengetedza maviri akapatsanurwa vhezheni imwecheteyo codebase uye uchafanirwawo kugadzirisa matambudziko akaomarara kutenderedza kuti vhezheni dzinotumirwa sei kupedza vashandisi Hwako budiriro uye zvikwangwani zvekusimbisa mhando zvichaneta nekuguma kwemaitiro, asi iwe ungangobvuma kuti kudyara kwenguva nezviwanikwa zvaive zvakangwara. Mune hyper-makwikwi software misika, iwe unofanirwa kuchengetedza vashandisi kufara uye hapana inokurumidza nzira yekuvaita kuti vasafare pane kungoerekana wachinja yako interface.
Tags: Appmhakakugutsikana kwevatengikusunungurwa kutsvachikwiriro
Jeff ndiye CEO uye co-muvambi we CaseFleet. CaseFleet ndeye kesi manejimendi software iyo inopa masimba ma litigator kuti akunde zvimwe, aine maturusi ekugadzira nguva, kurembera karenda, kubhadharisa uye nezvimwe.
Ko Chiitiko Kushambadzira Kunowedzera Sei Kutungamira Generation uye Revenue?
Jun 14, 2017 pa7: 54AM
Kazhinji, patino gadziridza chishandiso chitsva tinoita shuwa kuti chekare ichiri mune inoshanda mode kudzamara vanhu vaisimudzira kuti ive nyowani vhezheni. Chero chiitiko chakaipa chinomanikidza mushandisi kusarudza kubva kumasevhisi ako. Izvo zvakakosha kwazvo kuti bhizinesi riwane iyo nguva yekuziva usati watanga chirongwa chitsva.
Uye zvakare, bvunza vanhu kuti vape mhinduro. Kutanga kutsva inguva iyo vanhu vanofarira kugovana zvavanofunga pamusoro peapp. Kana vaine chimwe chinhu chitsva mupfungwa zvino vanozogovana newe. Izvo zvichagadzira mukana mutsva wemugadziri wako kuti awedzere icho chimiro vanhu vanokurudzira.
Aug 15, 2017 pa 5: 47 AM
Patinotumira maemail kumutengi wedu maererano nekuchinja kukuru kune webhusaiti. Isu tinovachengeta ivo vachiwana iyo yekare webhusaiti zvakare kana vachida. Zvinovaita kuti vagadzikane pavanenge vachivhura. Zvakare, mumwe mushandisi anogona kunge asingade dhizaini yako nyowani saka rudzi urwu rwevashandisi runogona kukurumidza kuenda kune yekare vhezheni zviri nyore.